Onodi - Shandong OBeer Machinery Equipment Co., Ltd.
Obeer bụ onye a ma ama na onye na-ebubata ngwa ọrụ biya biya na China, anyị na-elekwasị anya na usoro zuru oke nke usoro biya, gụnyere gụnyere usoro biya biya, akụrụngwa mmanya, na usoro mmepụta mkpụrụ.
Productionlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi mpaghara nke 8000 square mita, na ụlọ ọrụ anọ, ebe a na-akwadebe igwe argon gas, igwe na-agbazi onwe ya, ikuku na-akpaghị aka, igwe na-ehicha, akụrụngwa, wdg. EC asambodo, ihe karịrị injinia 10, onye nyocha na onye nchịkwa biya debara aha.
Companylọ ọrụ Obeer na-ekwusi ike na ụkpụrụ "ọrụ na-aba uru, ọrụ na-eme n'ọdịnihu", na-agbaso ụkpụrụ ọrụ nke "nkọwa nha anya zuru oke", gbalịsie ike n'ịmepụta njikwa na ụdị ọrụ dabere na ngwaahịa na teknụzụ uru. Anyị na-esi ọnwụ na-eme na-emepe emepe na ọkachamara ebe, na-agbalị kasị mma anyị na-enyere ndị ahịa na-emeri kacha mma uru.
Iji mezuo ihe ndị dị elu na ngwa na ọrụ ọrụ, ụlọ ọrụ Obeer gafere ISO9001: 2008 mma akwụkwọ na ule akwụkwọ CE maka ahịa Europe na America.
Dabere na ụkpụrụ nke "mma dị ka isi", ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro teknụzụ biya biya, na-emepụta ma na-arụpụta ihe biya biya kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ; akụrụngwa ahụ dị mma na arụmọrụ, nke magburu onwe ya na arụmọrụ ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ, ọ bụkwa nhọrọ mbụ maka ịme biya biya dị mma. Anyị mbụ na klas na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ mmepe, mbụ na klas brewing technology, ọkachamara mmepụta technicians, elu nhazi akụrụngwa, ike a zuru ezu mgbe-sales ọrụ na nkwa usoro, na-enwe magburu onwe akụrụngwa ọkọnọ na ọrụ ike. Na afọ nke mmepụta na ime ihe, ụlọ ọrụ na-agba mbọ na-enye turnkey oru ngo, na-aghọta onye-akwụsị ị nweta, na-enye gị a na nso nke ọrụ.
Nabata onye ọ bụla biya biya ọbịbịa anyị.